नयाँ सामाजिक नेटवर्क सुरू गर्न केहि राम्रो समय छ? | Martech Zone
बुधवार, जनवरी,, २०१२ आइतवार, जनवरी २,, २०१। Douglas Karr
म सामाजिक मिडिया मा धेरै कम समय खर्च गर्दैछु। त्रुटिपूर्ण एल्गोरिदम र अनादरपूर्ण असहमतको बीचमा, म सोशल मीडियामा कम समय बिताउँछु, म अझ बढी खुशी छु।
केहि व्यक्तिहरू जुन मैले मेरो असन्तुष्टि साझा गरेको थिएँ भनेर मलाई भन्यो कि यो मेरो आफ्नै गल्ती थियो। उनीहरूले भने कि यो विगत केही बर्षहरूमा मेरो राजनीतिको खुला छलफल हो जसले ढोका खोल्यो। म साँच्चिकै पारदर्शितामा विश्वास गर्दछु - राजनीतिक पारदर्शितासमेत - त्यसैले म दुबै आफ्नो विश्वासमा गर्व गर्दै थिएँ र वर्षौंदेखि उनीहरूको पक्षमा बोलें। यसले राम्रोसँग काम गरेन। त्यसोभए, गत बर्षमा मैले राजनीतिलाई अनलाइन छलफल नगर्न ठोस प्रयास गरेको छु। चाखलाग्दो कुरा के हो भने मेरा अवरोधकारीहरू अझै मुखर छन् जस्तो उनीहरू पहिले कहिल्यै आएका छैनन्। मलाई लाग्छ उनीहरू इमान्दारीसाथ केवल म शान्त हुन चाहन्थे।
पूर्ण खुलासा: म एक राजनीतिक अजीब हुँ। मलाई राजनीति मन पर्छ किनकि मलाई मार्केटिंग मन पर्छ। र मेरो झुकाव एकदम अनौंठो छ। व्यक्तिगत रूपमा, म आफैलाई जवाफदेही राख्छु विश्वलाई राम्रो ठाउँ बनाउन मद्दत गर्न। क्षेत्रीय रूपमा, म एकदम उदार छु र खाँचोमा परेकाहरूलाई मद्दत गर्नको लागि करको प्रशंसा गर्दछु। राष्ट्रीय स्तरमा, यद्यपि, म विश्वास गर्दछु कि हामी परिवर्तनको लागि धेरै टाढा छौं।
म कुनै सिकार भएन, तर मेरो स्वतन्त्रताको परिणामले सबैलाई आक्रमण गर्न म खोल्दछ। मेरा साथीहरू जुन झुकाव छोड्छन् भनेर राष्ट्रिय रूपमा विश्वास गर्दछु म एक ब्याकवुड्स हुँ, दायाँ-पखेटाको काम। मेरा साथीहरू जुन स्थानीय रूपमा झुकावमा छन् भनेर अचम्म मान्दछन् कि किन हेक मैले धेरै प्रजातन्त्रहरूसँगै ह्या hanging आउट गरिरहेको छु। र व्यक्तिगत रूपमा, म कुनै पनि दिशामा लेबल गरिएको तिरस्कार गर्दछु। मलाई लाग्दैन कि कुनै व्यक्ति वा राजनीतिक विचारधाराको बारेमा सबै कुरा घृणा गर्नु आवश्यक छ यदि तपाईं एक व्यक्ति वा त्यो विचारधाराको पक्षसँग असहमत हुनुहुन्छ भने। अर्को शब्दमा, म आज केहि नीति परिवर्तनलाई सराहना गर्न सक्छु कि राजनीतिज्ञहरूले उनीहरूलाई सम्मान गरेनन्।
सामाजिक नेटवर्कमा फर्कनुहोस्।
मलाई लाग्छ सोशल मिडियाको अद्भुत प्रतिज्ञा यो हो कि हामी इमानदार हुन सक्छौं, एक अर्कालाई जानकारी दिन, एक अर्कालाई बुझ्न, र अझ नजिक हुन सक्छौं। वाह, म गलत थियो। सामाजिक मिडियाको अज्ञात व्यक्तिहरू जसमा तपाईंले अन्यथा ख्याल गर्नुहोला भन्ने व्यक्तिमा फ्याँक्नको व्यक्तित्वगत क्षमताको साथ।
सामाजिक नेटवर्कहरू भाँचिएका छन्, र शक्तिको शक्तिले यसलाई बिगार्दै छ (मेरो विचारमा)।
On ट्विटर, अफवाह यो छ कि यदि तपाईं द्वारा अवरुद्ध छ williamlegate, तपाइँ एक दायाँ-पखेटा को नट को रूप मा चिन्न सकिन्छ र हो छायाबन - मतलब तपाईका अपडेटहरू सार्वजनिक स्ट्रिममा प्रदर्शित हुँदैनन्। मलाई थाहा छैन यो सहि छ कि छैन, तर मैले याद गरे कि मेरो बृद्धि स्थिर भईरहेको छ। यसको डरलाग्दो पक्ष यो हो कि म वास्तवमा ट्विटरको आनन्द लिन्छु। म नयाँ व्यक्तिहरूसँग भेट्छु, आश्चर्यजनक कथाहरू पत्ता लगाउँछु, र त्यहाँ मेरो सामग्री साझा गर्न मनपर्दछ।
मैले सोधें @ ज्याक, तर सही खुला फेसनमा - मैले प्रतिक्रिया अझै सुनें।
अरे @ ज्याक, म को एक विशाल प्रशंसक हुँ ट्वीटर र म हुन सक्छ देखे #Shadowbanned। म तपाईंलाई मेरो ट्वीटहरू पढ्न मन पराउँछु र मलाई के भन्नुपर्दछ, मेरो राजनीति को बारेमा, दुर्भावनापूर्ण वा अनादरपूर्ण। साँच्चै यो देखेर निराश। यदि तपाईं मेरो जस्तो व्यावहारिक मानिसहरूलाई प्रतिबन्धित गर्दै हुनुहुन्छ - जुन डरलाग्दो हो।
- Douglas Karr (oudouglaskarr) जनवरी 15, 2018
On फेसबुक, तिनीहरू अब अधिक व्यक्तिगत कुराकानीको लागि फिड फिल्टर गर्न स्वीकार गर्दै छन्। यसले समुदायहरूलाई निर्माण गर्न निगमहरूको बर्षे धकेल्ने पछि, उपभोक्ताहरू र व्यवसायहरूसँगको उनीहरूको अन्तरक्रियामा बढी पारदर्शी हुनेछ, र कम्पनीहरूले निर्माण गर्ने एकीकरण, स्वचालन र रिपोर्टि millionsमा लाखौंको लगानी गर्ने। फेसबुकले सट्टामा प्लग तान्यो।
मेरो इमान्दार धारणामा, राजनीतिक झुकावको गोप्य बहिष्कार स्वयं झुकाव भन्दा खतरनाक छ। मलाई खाताहरू गैरकानुनी गतिविधि बढावा दिएका सामाजिक खाताहरूमा जासूसी गर्नमा कुनै समस्या छैन, तर मलाई निगमहरूको ठूलो समस्या छ उनीहरूले चाहेको पक्षमा बहसलाई चुपचाप समायोजन गरे। फेसबुकले सामान्य स्रोतमा समाचार स्रोतहरू छोड्दैछ। अर्को शब्दहरुमा, बबल अधिक ठोस हुनेछ। यदि एक अल्पसंख्यकले असहमत भए, केही फरक पर्दैन - तिनीहरूलाई जे भए पनि बहुमतको सन्देश खुवाइनेछ।
त्यहाँ एक उत्तम सामाजिक नेटवर्क हुनु पर्छ
केहि मानिसहरु विश्वास गर्छन् कि फेसबुक र ट्विटर जुन हामी अवरुद्ध छौं। धेरै नेटवर्कहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न कोसिस गरेका छन् र सबै असफल भएका छन्। ठिक छ, हामीले नोकिया र ब्ल्याकबेरीको बारेमा कुरा गर्‍यौं जब यो मोबाइल फोनको कुरा आउँदछ। मलाई कुनै श have्का छैन कि नयाँ नेटवर्कले मार्केटमा हावी हुन र प्राप्त गर्न सक्दछ जब यो उही स्वतन्त्रतालाई समर्थन गर्दछ जुन ट्विटर र फेसबुकको सफलता सक्षम गर्दछ।
मुद्दा खराब विचारधारा होइन, यो खराब आचरण हो। हामी अब सम्मानपूर्वक ती मानिसहरूसँग सहमत हुँदैनौं जुन हामी असहमत छौं। आजको अपेक्षा अपमानजनक लाज, उपहास, बदमाशी, र मौन हो। हाम्रो समाचार स्टेशनहरू यो व्यवहार प्रतिबिम्बित गर्दछ। हाम्रा राजनीतिज्ञहरूले पनि यो व्यवहार अपनाए।
म विचारको विविधता को एक ठूलो प्रशंसक हुँ। म तपाईंसँग असहमत छु र तपाईंको विश्वासलाई अझै सम्मान गर्दछु। दुर्भाग्यवस, दुई पार्टीहरूको साथ, हामी केवल एक अर्काको टाउको माथि क्लब गर्‍यौं बरु मध्यमा त्यस्तो समाधान ल्याएर जुन सबैलाई आदर गर्दछ।
यो मार्केटिंग संग के गर्न सबै छ?
जब माध्यमहरू (समाचार, खोजी, र सोशल मिडिया) राजनीतिमा हस्तक्षेप भइरहेको पाइन्छ, यसले प्रत्येक व्यवसायलाई असर गर्छ। यसले मलाई असर गर्छ। ममा कुनै शंका छैन कि मेरो विश्वासले मेरो व्यवसायलाई असर गरेको छ। म अब मेरो उद्योगमा नेताहरूको लागि काम गर्ने छैन जुन मैले वास्तवमा खोजेको थिएँ र उनीहरूबाट सिकेका थिए किनकि तिनीहरूले राजनीतिक मुद्दाहरूमा मेरो विचारहरू पढेका थिए र उनीहरूको पिठ्यूँ फर्काए।
र अब हामी हेर्छौं कि स्पेक्ट्रमको प्रत्येक पक्षमा सामाजिक न्याय योद्धाहरू ब्रान्डलाई जिम्मेवार ठान्दछन् जहाँ उनीहरू तिनीहरूको विज्ञापनहरू राख्छन्, र उनीहरूका कर्मचारीहरूले अनलाइन के भन्छन्। उनीहरूले बहिष्कारलाई प्रोत्साहन गर्छन् ... यसले केवल व्यवसायका नेताहरूलाई असर गर्दैन, तर प्रत्येक कर्मचारी भित्र र वरपरका समुदायहरूलाई। एउटा ट्वीटले अब स्टक मूल्य, चोट पुर्‍याउने व्यापार, वा क्यारियर नष्ट गर्नुहोस्। म मेरो विचारधारासँग असहमत व्यक्तिको लागि आर्थिक हिसाबले कहिल्यै सजाय पाउन चाहन्न। यो धेरै छ। यो काम गरिरहेको छैन।
यी सबैको नतिजा हो कि व्यवसायहरू सामाजिक मिडियाबाट फिर्ता लिदैछन्, यसलाई अँगालेको छैन। व्यवसायहरू कम पारदर्शी हुँदैछन्, बढी पारदर्शी हुँदैनन्। व्यापारी नेताहरूले राजनीतिक विचारधाराको समर्थन लुकाइरहेका छन्, यसलाई बढावा दिइरहेका छैनन्।
हामीलाई अझ राम्रो सामाजिक नेटवर्क चाहिन्छ।
हामीलाई एउटा यस्तो प्रणाली चाहिन्छ जसले शिष्टाचार, मोचन र सम्मानलाई पुरस्कृत गर्छ। हामीलाई प्रणाली चाहिएको छ जसले रिस उठेको ईको चेम्बरहरू विकास गर्नुको सट्टा विपरित दृष्टिकोणहरूलाई बढावा दिन्छ। हामीले एक अर्कालाई शिक्षा दिनु आवश्यक छ र वैकल्पिक दृष्टिकोणका लागि एक अर्कालाई पर्दाफास गर्नु पर्छ। हामी अन्य विचारधारा प्रति सहिष्णु हुनु आवश्यक छ।
यस प्रकारको सोशल नेटवर्कि platform प्लेटफर्मको विकास गर्न अहिले भन्दा राम्रो समय छैन।